Ny fitaovana famokarana semiara dia mandany vola 14% amin'ity taona ity ary hitombo 27% amin'ny herintaona - Infinite-electronic
HomeNewsNy fitaovana famokarana semiara dia mandany vola 14% amin'ity taona ity ary hitombo 27% amin'ny herintaona
Noterena tamin'ny fihenan-tsain'ny sehatry ny fahatsiarovan-tena, ny fihenan'ny 2019 dia manamarika ny fahataperan'ny fandrosoana nandritra ny telo taona ho an'ny fandaniana fitaovana.
Nandritra ny roa taona lasa, ny fahatsiarovan-danja dia nitazona anjara mavitrika eo amin'ny 55 isan-jaton'ny fitaovam-pitaovana rehetra, ny ampoheverina ho lany amin'ny 45% amin'ny 2019, saingy ny fihenana hatramin'ny 55% amin'ny taona 2020 dia ny SEMI no voalaza.
Miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena mampisaraka ny fandaniana amin'ny fandaniana tanteraka, dia misy fiantraikany eo amin'ny tsenan'ny fahatsiarovan-tena ny fiakaran'ny fitaovana rehetra.
Ny fanadihadian'ny SEMI momba ny fandaniana fitaovam-pandrafetana tamin'ny herintaona dia mampiseho fa ny halafon'ny tahiry avoitra sy ny fahampiana ny fangatahana dia nitarika ho amin'ny fihenan-dàlana goavana kokoa noho ny an'ny DRAM sy ny NAND (3D NAND) tamin'ny faramparan'ny volana 2018, handroahana ny fandaniana fahatsiarovana 14%.
Ny fironana henjana dia andrasana hanohy ny tapany voalohan'ny 2019, miaraka amin'ny fandaniana fahatsiarovan-tena amin'ny 36%, na dia mety hiverina 35% aza ny fandaniana fahatsiarovan-tena amin'ny tapany faharoa amin'ny taona.
Foundry no sehatra faharoa lehibe indrindra aorian'ny fahatsiarovana ny fandaniana fitaovana. Tao anatin'ny roa taona farany, ny tahan'ny isan-taona dia niakatra avy amin'ny 25% hatramin'ny 30% isan-taona. Amin'ny taona 2019 sy 2020, ny ampahany isan-taona dia andrasana hijanona amin'ny 30% eo ho eo, araka ny fanamarihan'ny SEMI.
Ary raha toa miova kely kokoa noho ny sehatry ny fahatsiarovana amin'ny fandaniana fitaovam-pamokarana ny fitrandrahana, tsy manimba ny fiovàna eo amin'ny tsena izy ireo.
Ohatra, taorian'ny fahakelezan'ny fahatsiarovan-tena, ny fandaniana fitaovam-pako dia nilatsaka 13% tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona 2018 hatramin'ny tapany voalohan'ny taona, hoy ny SEMI.